Hebrifo 13 NA-TWI - Mmara ne nkyia - Monnodɔ mo ho mo ho - Bible Gateway
Hebrifo 12Yakobo 1
Hebrifo 13 Nkwa Asem (NA-TWI)
13 Monnodɔ mo ho mo ho sɛ anuanom wɔ Kristo mu. 2 Monkae na munnye ahɔho wɔ mo afi mu. Ebinom yɛɛ saa nam so gyee abɔfo a na wonnim. 3 Monkae wɔn a wɔda afiase na momfa no sɛ mo ne wɔn na ɛda hɔ. Monkae wɔn a wɔrehu amane na momfa no sɛ mo ne wɔn na ɛrehu saa amane no.